CHROME ကို COMPONENTS ငရုတ်ကောင်း FLASH ကိုမှ UPDATES တွေကို CHECK - CHROME ကို GOOGLE - 2019
Google က Chrome မှာငရုတ်ကောင်း Flash ကိုအစိတ်အပိုင်းမှ updates များကိုစစ်ဆေးသည်ရန်ကဘယ်လို
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲတစ်ဦး hard disk ကို partition ကိုသောအကြောင်းအရာသည်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုရင်ဆိုင်ရပေမည်သည့်အခါ "Volume ကို Extend" disk space ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tool များ၏ window တွင်တက်ကြွစွာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒီ option ကို၏တပိုင်တနိုင်စေအဖြစ်7windose တစ်ဦးကို PC မှာသူတို့ကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်စေခြင်းငှါအဘယျသို့အချက်များကြည့်ကြရအောင်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows7မှာ "Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု"
ဖိုင်စနစ်က NTFS ထက်အခြားအမျိုးအစားကား,
အဆိုပါ disk ပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသရှိပါသည်။
ထိုအခါငါတို့သည် drive ကိုချဲ့ထွင်နိုင်မှ, လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖော်ပြထားမှုကိစ္စတစ်ခုချင်းစီအတွက်သိမ်းယူခံရဖို့လိုအပ်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: ပြောင်းလဲခြင်းဖိုင်စနစ်ကအမျိုးအစား
NTFS (ဥပမာ, FAT) မှကွဲပြားခြားနားသောသငျသညျကိုချဲ့ထွင်ချင်သော partition ကို၏ file system ကိုအမျိုးအစားဆိုပါကသင့်လျော်စွာချပ်စေနိုင်သည်။
သတိပေးခြင်း! သငျသညျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံစံထွက်သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ, စစ်ဆင်ရေး generate တံ့သောပေါ်မှ partition ကိုပေါ်, ပြင်ပသိုလှောင်ရေးကိရိယာအပေါ်သို့မဟုတ်အခြားအသံအတိုးအကျယ်ကို PC ရဲ့ hard drive ကိုဖို့အားလုံးကိုဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲရွှေ့ဖို့သေချာပါစေ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပုံစံပြီးနောက်အားလုံး data တွေကိုအပြီးတိုင်ပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်။
ကလစ်နှိပ်ပါ "Start" နှင့်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ကွန်ပျူတာ".
ဒီ PC ကိုချိတ်ဆက် disk ကို devices များအပေါငျးတို့သအပိုင်းတစ်ဦးကစာရင်းဖြစ်သည်။ right-click (PKM) သင်ချဲ့ထွင်ချင်သောအသံအတိုးအကျယ်၏နာမတော်အောက်မှာ။ ယင်းကျယ်ပြန့် menu ကနေ, select လုပ်ပါ " ... ကို format".
drop-down list ထဲမှာ setting များကိုပုံစံချဖွင့် window ထဲမှာ "File System ကို" ရွေးဖို့သေချာပါစေ "NTFS"။ ပုံစံချပေးများ၏စာရင်းပစ္စည်းဆန့်ကျင်တဲ့အမှတ်အသားထွက်ခွာနိုင် "မြန်" (ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) ။ စာနယ်ဇင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင်ရန် "Start".
ဒီပြီးနောက်, partition ကိုဖိုင်စနစ်၏တပ်မက်လိုချင်သောအ type ကိုမှ Format ချပါလိမ့်မည်, နဲ့ volume ချဲ့ထွင်ရွေးချယ်စရာရရှိမှုနှင့်အတူပြဿနာကိုဆက်ရှိနေသေး
တစ်ဦး hard drive ကို format လုပ်
ကို C Windows7ကို disc ကို format လုပ်နည်း
Method ကို 2: disk ပေါ်မှထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသ Create
အထက်ဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းသငျသညျ၎င်းငျး၏အကြောင်းရင်းမှာ disk ပေါ်မှထဲကအသုံးမပြုတဲ့နေရာမရှိခြင်းအတွက်တည်ရှိသည်အခါ, ရရှိနိုင်အသံအတိုးအကျယ်များမှာတိုးချဲ့ options များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမကူညီဘူး။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဒီဒေသ snap-in ကိုပြတင်းပေါက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် "Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု" အစားကသူ၏လက်ဝဲဘက်ထက်ချဲ့ကားအသံအတိုးအကျယ်၏ညာဘက်။ အဘယ်သူမျှမထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသလည်းမရှိဆိုပါကရှိပြီးသားအသံအတိုးအကျယ်မဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ချုံ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါသည်။
သတိပေးခြင်း! ဒါကြောင့်ကိုယ့် disk ပေါ်မှာနေရာလွတ်များနှင့်အချို့သောတိကျတဲ့အသံအတိုးအကျယ်မချောင်၏ဧရိယာမဟုတ်ဘူး - ဒါဟာထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်ပေါ်မှာအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်ကဲ့သို့သောသူအပေါင်းတို့ထက်, partition ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသရရှိရန်အလို့ငှာ, သင်တို့ကိုအခြားမီဒီယာမှ delete ချင်သောအသံအတိုးအကျယ်ကနေ data အားလုံးကိုရွှေ့။ ထိုအခါ window ထဲမှာ "Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု" ကလစ် PKM သငျသညျကိုချဲ့ထွင်ချင်သောတဦးတည်း၏ညာဘက်တိုက်ရိုက်တည်ရှိသည်သောအသံအတိုးအကျယ်အမည်, သည်။ ပေါ်လာသော list ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Delete Volume ကို".
ဤအဖျက်ပစ် partition ကိုကနေဒေတာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းသတိပေးအတူပေးတဲ့ dialog box ကိုဖွင့်လှစ်။ သင်တို့မူကားပြီးသားလုံခြုံစွာနောက်ထပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောလွှဲပြောင်းခဲ့ကြအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုကတည်းကကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Yes" ကို.
အဲဒီနောကျရှေးခယျြထားသောအသံအတိုးအကျယ် optional ကိုပြုလုပ်၏လက်ဝဲမှတည်ရှိပြီးသောအပိုင်းစဉ်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါသည် "Volume ကို Extend" တက်ကြွဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ကိုချဲ့ထွင်ရန်သွားကြသည်သောပမာဏ၏ချုံ့ခြင်းဖြင့်ထဲကအသုံးမပြုတဲ့ disk space ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမဟုတ်ရင်ဒီကိုင်တွယ်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေလုပ်ကတည်းကချုံ့အပိုင်း NTFS file system ကိုအမျိုးအစားရှိကြောင်းအရေးကြီးပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချုံ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေခြင်းမပြုမီခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာ နည်းလမ်း 1.
ကလစ်နှိပ်ပါ PKM လျှပ်တပြက်အတွင်း "Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု" ချဲ့ထွင်ရန်သွားသောအရာစာရင်းပေါ်မှာ။ မီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ကျုံ့ Volume ကို".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, လယ်ပြင်နေရာချုံ့ရည်ရွယ်သည်ဦးတည်ရာ၏အရွယ်အစားအတွက်, သင်ချုံ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့မရရှိနိုင်အာကာသ၏လယ်ပြင်တွင်ပြသကြောင်းတန်ဖိုးကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သငျသညျ volume ကိုစာနယ်ဇင်းသတ်မှတ်ပြီးနောက် "Compress".
Next ကိုအခမဲ့ထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသဖြစ်လတံ့သောနောက်, အသံအတိုးအကျယ်ချုံ့ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီအကြောင်းအချက်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ် "Volume ကို Extend" ပေးထားသောက partition အတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်လာသည်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရသောအခါထို option "Volume ကို Extend" လျှပ်တပြက်အတွင်းတက်ကြွစွာမဟုတ် "Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု"ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စေရန်, သင် NTFS file system ကိုအတွက် hard drive ကို format လုပ်အသုံးပြုပုံဖြစ်စေထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝကျကျ, ကသာယင်း၏အသွင်အပြင်နောက်ကွယ်မှအချက်နှင့်အညီရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။